ग्ल्यामर्स गर्छु भल्गर गर्दिन | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← स्पेनलाई विश्वकप उपाधि, अक्टोपसको सबै भविष्यवाणी मिल्यो
रोजगारीका लागि साउदी पुगेका १५ नेपाली अलपत्र →
ग्ल्यामर्स गर्छु भल्गर गर्दिन
नम्रता सापकोटा, मोडल
स्नातकमा अध्ययनरत नम्रता सापकोटालाई क्यारियरभन्दा पढाइकै बढी चिन्ता छ । गायक रामकृष्ण ढकालको ‘जन्मेपछि…’ गीतको म्युजिक भिडियोमार्फत दुई वर्षअघि रंगीन दुनियाँमा प्रवेश गरेकी उनले यसबीच आधा दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरिसकेकी छिन । निर्माता, निर्देशक बुवा मेघनाथ सापकोटाकी यी छोरीको लक्ष्य भनेको चलचित्रमा अभिनय गर्नु हो ।
० म्युजिक भिडियोमा कसरी आइयो ?
– दुई वर्षअघि एघार कक्षामा पढदै गरेको बेला गायक रामकृष्ण ढकालको ‘जन्मेपछि…’ गीतमा मोडलिङ गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । पछि डम्बर नेपालीको मलाइ रुने मन थिएन, रामचन्द्र न्यौपानेको झम्के फुली जस्ता गीतमा पनि मोडलिङ गरें ।
० मोडलिङ गर्ने योजना बनाएर नै आएको हो ?
– खासै सोंच त थिएन तर स्कुले जीवनमा नृत्यमा रुचि भएकाले राम्रो कलाकार हुने इच्छा थियो । फेरि घरका सबै मान्छे मिडिया क्षेत्रमा भएकाले पनि सजिलो भयो ।
० परिवारले सहयोग गर्यो ?
– बुवा मेघनाथ सापकोटाले आठ नौ बर्षअघि ठुलो पर्दाको चलचित्र ‘उनको सम्झना’ निर्माण गरिसक्नु भएको थियो । यसैगरी बक्ररेखा, सम्झौता लगायतका टेलिसिरियल पनि बनाइसक्नु भएको थियो । त्यसको असर पनि पर्‍यो ।
० अहिलेसम्म चलचित्रमा अभिनय गरिएको त देखिएको छैन नि ?
– एक चलचित्रमा अभिनय गरिसकेको छु । चलचित्रको सबै काम जेठमा सकिनछ र भदौमा प्रदर्शन पनि हुन्छ होला तर नाम चाही अहिले नभनि हालौं । पत्रकार सम्मेलन गरेर मात्र नाम घोषणा गर्ने कुरा भएको छ । चलचित्रमा म नायिकाको रुपमा देखिने छु ।
० अन्य चलचित्रहरुमा पनि प्रस्ताव आएको होला नि ?
– दुई, तीन जनाले निर्देशकले चलचित्रका लागि फोन गर्नु भएको छ तर जुन पायो त्यही नगर्ने पक्षमा छु ।
० जुन पायो त्यही भनेको बढी एक्स्पोज गर्ने खालको हो ?
– त्यस्तै त्यस्तै हो । आफुलाई सुहाउने किसिमको हुनुपर्‍यो । समाजलाई नपच्ने खालको एक्सपोज गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
० ग्ल्यामर्स त हुन सकिन्छ नि ?
– सकिन्छ । साडी र कुर्ता सुरुवाल मात्र लगाउने भन्न खोजेको पनि होइन । सामान्यतय युवती ग्ल्यासर्म हुनुपर्छ तर भल्गर हुनु भएन । एक्सपोजको नाममा जे पायो त्यही चाही गर्न भएन ।
० भनेपछि भल्गर नगर्ने ?
– ग्ल्यामर्स गर्छु, भल्गर गर्दिन ।
० नयाँ नायिका, कडके र छडके आँखा लगाउने त धेरै होलान नि ?
– त्यो आफुमा भर पर्छ । मलाई त्यस्तो साह्रो केही परेन । कति जनाले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ । आफुलाई परेको छैन र झेल्नु परेको छैन । धेरैलाई परेको छ भन्ने सुनेकी छु ।
० नायिकाहरु चारित्रिक मामिलामा अलि कमजोर देखिएका छन् नि ?
– आफु कसरी प्रस्तुत भइन्छ, त्यो अनुसार नै सबै कुरा हुन्छ । पहिले त आफु राम्रो हुनुपर्‍यो । फेरि नेपाली समाज नै त्यस्तै छ । मिस्टेक दुवैको हुन्छ, बदनाम एउटा हुन्छ ।
० पहिलो पटक क्यामरा फेश गर्दाको अनुभव ?
– केही फिल भएन । सानैदेखि विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिएको थिएँ । फेरि बुवाको चलचित्रमा मैले बाल कलाकारको भुमिका पनि निर्वाह गरेको छु ।
० नेपाली संगीत र चलचित्रको को स्तर किन माथि पुग्न सकेको छैन ?
– संगीत पहिलेभन्दा धेरै माथि पुगे जस्तो लाग्छ । नेपाली चलचित्रलाई हिन्दी चलचित्रले बढी प्रभावित पारेकाले सोचेअनुसारको बजार लिन नसकेको चाही पक्का हो ।
० प्रेम प्रस्ताव त आउछ होला नि ?
– आउँछन नि किन नआउने । आउने बेला नै यही हो । बुढी भएपछि कसले पो प्रस्ताव गर्ला र ।
० मन परेको फेला परेको छैन ?
– मन परेका साथी छन, तर त्यसरी कसैलाई मन पराइएको छैन । अहिले खाली नै हो ।
० मिस कल कतिको आउछ ?
– आउछ ।
० विहे चाही कस्तो गर्ने ?
– मन पराएर लव म्यारिज नै गर्ने हो ।
० युवतीको लुक्स कस्तो हुनुपर्छ ?
– अनुहार मात्र राम्रो होइन, बोल्ने तरिका राम्रो र अलिकति फेशनवेल पनि हुनुर्छ ।
० चलचित्र कतिको हेरिन्छ ?
– ठिकै हिन्दी हेरिन्छ । अहिले विस्तारै नेपाली चलचित्र पनि हेर्ने गरेको छु ।
० धेरै पटक हेरेको चलचित्र ?
– एक पटक भन्दा बढी त कुनै चलचित्र हेर्दिन ।
० दर्शकले पनि तपाइ अभिनित चलचित्रलाई यस्तै भने भने नि ?
– हाहाहा, त्यस्तो हुँदैन होला ।
० प्राथमिकतामा अध्ययन पर्छ कि क्यारियर ?
– पढाई सकेपछि क्यारियर त्यसै राम्रो हुन्छ ।